mairie-antananarivo – CUA- Amboaran’ny ben’ny tanàna amin’ny Rugby
CUA- Amboaran’ny ben’ny tanàna amin’ny Rugby
administrateur 31 jolay 2018 Commentaires fermés
Fampiraisana ireo mpilalao rugby, fampiroboroboana hatrany ny taranjam-panatanjahantena baolina lavalava, ireo no anisan’ny tanjona amin’ny hanaovan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) fifaninanana hiadiana ny amboaran’ny Ben’ny Tanàna na Coupe du Maire ny 12, ny 19 ary ny 26 aogositra ho avy izao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Nampahafantatra izany fifaninanana izany tamin’ny mpanao gazety ny tompon’andraikitra ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra io maraina io tetsy amin’ny Lapan’ny Tanànan’Analakely notarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Ireo ekipa sangany ao amin’ny Federasiona sy ny ligin’Analamanga no handray anjara amin’izao fifaninanana izao, hisy ihany koa ny tarika vehivavy mpilalao rugby handray anjara amin’izany.
Ny amboara hifaninanana dia tena ho lasan’ny mpandresy amin’ny famaranana, hisy ihany koa ny loka manokana hafa avy amin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo. Ny fitsarana ny lalao dia ho matihanina satria hampiasaina ny ecran géant ao Mahamasina ho fitsarana ny lalao amin’ny alalan’ny video.
Nitondra fanazavana sy ny tanjona ary ny fandaharam-potoana amin’izao fiadiana ny amboaran’ny ben’ny tanàna eo amin’ny baolina lavalava izao, ny tale misahana ny kolontsaina sy ny fiainam-piaraha-monina ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra Patrick Andriamisa Ramihone.
Nambarany fa tsy mandray anjara amin’izao fiadiana ny amboaran’ny ben’ny tanàna izao ny USCAR ekipan’ny CUA satria hisy ny lalao fihantsiana na match de défi hifandonany amin’ny CNAPS amin’ny andro famaranana ny 26 aogositra. Andiany voalohany izao fiadiana ny amboaran’ny ben’ny tanàna eo amin’ny Rugby izao fa mbola hitohy isan-taona izany, ary hiitatra amin’ny taranjam-panatanjahantena hafa koa.